Moon Nalka Miiska - Joornaalka Naqshadeynta
Nalka Miiska Nalkaan wuxuu ciyaaraa door firfircoon si uu ugu raaco dadka meelaha meheradda laga shaqeeyo subaxa ilaa habeenka. Waxaa loogu talagalay dadka maskaxda ka shaqaynaya ee maskaxda ku haya. Xariggu wuxuu ku xirnaan karaa kombiyuuter laptop ama koronto awood. Qaabka dayaxu wuxuu ka koobnaa saddex meelood meel goob ahaan sida astaan kor u kacaysa oo ka socota muuqaal dhul gariir ah oo ka sameysan lakab aan kala go 'lahayn. Qaabka dusha sare ee dayaxu wuxuu xasuusinayaa hage degitaanka mashruuc hawleed. Goobtu waxay umuuqataa farshaxanka iftiinka maalintii iyo aalad iftiin fududeysa oo shaqeysa habeenkii.
Magaca mashruuca : Moon, Magaca naqshadeeyayaasha : Naai-Jung Shih, Magaca macmiilka : Naai-Jung Shih.
Foomamka 3d daabacan iyo naqshada alaabta
Nalka Miiska Naai-Jung Shih Moon